काठमाडौं, १ मंसिर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन गर्ने तयारी गरेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालयले ओलीलाई मन्त्री हटाउने र बनाउने सम्पूर्ण
हिन्दुराज्य घोषणा नभएसम्म आन्दोलन : पाण्डे
काठमाडौं, १ मंसिर । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवंम पूर्व मन्त्री विक्रम पाण्डेले नेपाललाई हिन्दु राज्य घोषणा नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् । जानकी–बुद्ध रथ यात्राको
काठमाडौं, १ मंसिर । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रवक्ता एवम् सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले देशलाई समृद्ध बनाउन नेकपाबाहेक अन्य कुनै विकल्प नभएको बताएका छन् । मङ्सिर १४
चीनले नेपालको भूमी मिचेको छ, हतारमा विज्ञप्ती निकालेर गलत गर्यो : झा
काठमाडौं, १ मंसिर । राजपा नेपालका महामन्त्री केशब झाले चीनले नेपालको ११ ठाउँमा जमिन मिचेको आरोप लगाएका छन् । तर, चीनले यसबारेमा हतार गरेर आफ्नो विज्ञप्ती निकालेको भन्दै उनले आपत्ति
नेताहरुको सत्ता स्वार्थले देश सुरक्षित हुन सकेन : डा. चन्द्र भण्डारी (भिडियोसहित)
काठमाडौं, १ मंसिर । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता डा. चन्द्र भण्डारीले देशका नेताहरुको सत्ता स्वार्थले गर्दा देश सुरक्षित हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भने,‘देश भनेको सबैको
काठमाडौं, १ मंसिर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रभावशाली नेता वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाइने भएको छ । राष्ट्रियसभामा अबको दुई महिनापछि सदस्य पद खाली हुने र
नेकपा सचिवालय बैठक किन यति धेरै
काठमाडौं, १ मंसिर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालय बैठक निरन्तर बस्दै आएको छ । शुक्रबार सचिवालय बैठक बसेपछि शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको डायलसिसका कारण नबसेको बैठक आइतबार पनि बस्दैछ
काठमाडौँ, १ मंसिर । नेपाल र भारतको सीमा निर्धारणका लागि गाडिएका सीमास्तम्भको अद्यावधिक नापी विभागसँग तयारी अवस्थामा छ । प्रत्येक स्तम्भको अवस्थिति र निर्देशाङ्कलगायतको विस्तृत विवरणसहित ‘डाटाबेस’ तयार पारिएको छ
उपेन्द्र यादवले तत्काल सरकार नछोड्ने
काठमाडौं, १ मंसिर । सत्तारुढ दल समाजवादी पार्टीको काठमाडौंमा संघीय परिषद बैठकलगत्तै केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बसेको छ । बैठकको मुख्य एजेण्डा सरकारबाट पार्टी बाहिरिनुपर्नेमा केन्द्रित रहेको थियो । तर, केन्द्रिय
२७३ उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन
काठमाडौं, कार्तिक ३० । आगामी मङ्सिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि स्थानीय तहका उम्मेदवारको आज अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले स्वीकृत निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार एक उपमहानगरपालिका प्रमुख,
उपेन्द्रसँग हारे बाबुराम, पार्टीले सरकार नछोड्ने
काठमाडौं, ३० कार्तिक । सत्तारुढ दल समाजवादी पार्टीको काठमाडौंमा संघीय परिषद बैठकलगत्तै केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बसेको छ । बैठकको मुख्य एजेण्डा सरकारबाट पार्टी बाहिरिनुपर्नेमा केन्द्रित रहेको थियो । तर, केन्द्रिय
पत्रकाहरुलाई ‘गुड आफ्टरनून’ भन्दै ग्राण्डीबाट बाहिरिए प्रधानमन्त्री ओली (फोटोफिचर)
काठमाडौं, ३० कार्तिक । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराएर ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालबाट बाहिरिएका छन् । अस्पतालबाट बाहिरिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले अस्पताल प्राङगणमा उपस्थित् पत्रकारहरुलाई ‘गुड आफ्टनून’ भनेका